Beauty Device consumables Germany stcok, fanaterana mivantana avy any Alemaina
Vaovao mahafaly ho an'ny mpanjifanay rehetra, ankehitriny ny biraonay any Alemaina dia manana tahiry ho an'ireo zavatra azo ampiasaina: saron-tava hyaluronic acid, capsule oksizenina, membrane gelpads antifreeze, vahaolana Hydrofacial sy Aquafacial, Hydrojelly mask Powder sns. Saron-tava asidra hyaluronic: Mameno ny hamandoana amin'ny hoditra, manodina ary mifehy menaka ,Vonjeo ...
G5 Massager fitaovana manala cellulite
G5 Massage dia mpanotra mekanika izay miditra lalina kokoa noho ny azon'ny mpitsabo.Ny loha samihafa dia ampiasaina mba haka tahaka ny teknika fanorana samihafa.Ny lohan'ny fanorana dia voatosika hihodina amin'ny hetsika gyratory, mihetsika mihodina sy mihodina, miakatra sy midina ary miankavanana miaraka amin'ny tsindry, manome fanorana lalina.G...
Emsculpt Update —Ho avy ny teknolojia RF sy ny kojakoja fanamboarana hozatra Palvic
Ny fitaovana dia mifototra amin'ny applicator izay mamoaka angovo RF sy HIFEM + miaraka.Ho an'ny fanafoanana ny tavy sy ny fananganana hozatra miaraka amin'ny fotoam-pivoriana 30 minitra.Noho ny hafanana radiofrequency, ny mari-pana hozatra miakatra haingana amin'ny ambaratonga maromaro.Izany dia manomana ny hozatra ho an'ny ...
Ny fitsaboana jiro LED dia hahatonga ny hoditrao ho maizina, marina ve izany?
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-30
Ny fikarohana ara-pitsaboana maharitra dia nanamafy fa rehefa taratra eo amin'ny hoditsika ny jiro LED amin'ny halavan'ny onjam-peo voafaritra dia misy fiantraikany amin'ny fanavaozana ny hoditra, fanesorana ny mony sy ny freckles sy ny sisa.Fahazavana manga (410-420nm) Ny halavan'ny onjam dia 410-420nm hazavana hita maso manga-violet narrow band.Jiro manga c...
Inona no atao hoe soprano diode laser fanaintainana tsy misy fitsaboana volo?
Ny laser diode laser manala volo tsy misy fanaintainana (soprano) dia mampiasa laser pluse roa natao manokana mba hampitombo tsikelikely ny mari-pana amin'ny follicle volo ary hitazona izany amin'ny 45 degre mandritra ny minitra vitsivitsy.Ny fitaovana tanana dia mikoriana haingana eo amin'ny hoditra (fomba fandotoana tsy mahazatra), pulso laser 10 isaky ny ...
Inona no maha samy hafa ny monopolar RF sy bipolar RF?
Ny teknolojia onjam-peo RF dia nampiasaina betsaka tamin'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy ara-pitsaboana efa ho 20 taona.Miorina amin'ny tsy-invasiveness sy ny fitsaboana tsara vokany, dia tena tian'ny dermatologists sy ny mpanjifa.Hatramin'ny nahaterahan'ny fitaovana fitsaboana amin'ny onjam-peo voalohany tamin'ny taona 2002, rad...
Ahoana ny fomba fiasan'ny EMSculpt kibo sy ny vodiny amin'ny fananganana hozatra?
nataon'ny admin tamin'ny 21-07-20
Ny EMSCULPT dia mifototra amin'ny angovo elektromagnetika mifantoka amin'ny haavo avo.Ny fivoriana EMSCULPT tokana dia miteraka fihenjanana mahery vaika an'arivony izay tena zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny feo sy ny tanjaky ny hozatrao.Ny fomba fiasa EMSCULPT dia toy ny fanazaran-tena mafonja.Afaka mandry ianao...